Yiyiphi i-Metalest Reactive kwiTable Periodic?
I-Reactivity kunye noNxeba lomSebenzi weMetri
Isinyithi esisebenzayo kakhulu kwitafile zexesha eliyimfuneko yi- francium . Nangona kunjalo, i-francium yinto eyenziwe ngumntu kunye nemveliso emininzi kuphela eye yaveliswa, ngoko ke kuzo zonke iinjongo ezibonakalayo, isinyithi esisebenzisayo kakhulu yile cesium . I-Cesium iphendulela ngokukhawuleza ngamanzi, nangona i-francium eqikelelwe yayiza kusabela ngamandla .
Ukusebenzisa iCandelo lomSebenzi weMetri ukuXela ukuPhatha
Ungasebenzisa uchungechunge lwezinto zetsimbi ukuqikelela ukuba yintoni isinyithi esiya kusebenza kakhulu kunye nokuthelekisa ukusetyenziswa kwezixhobo ezahlukeneyo.
Uchungechunge lwentsebenzo yitshati ebeka uluhlu ngokubhekiselele kwindlela esithatha ngayo isinyithi sichitha i-H 2 ekuphenduleni.
Ukuba ungenayo itekethi yoluhlu lwezinto eziphathekayo, unokusebenzisa kwakhona iindwendwe kwitheyibhile lexesha elifanelekileyo ukuze uqikelele ukusetyenzwa kwesitye okanye ukungafani. Isinyithi esisebenzisekayo kakhulu sise -alkali yecandelo lezinto zetsimbi . I-Reactivity iyanda njengoko uhamba phantsi kweqela lezinyithi ze-alkali. Ukunyuka kwe-reactivity kuyahambelana nokuhla kwe- electronegativity (ukwandiswa kwombane-electropositivity). Ngoko ke, ngokujonga kwitheyibhile yenkcazelo , unokuqikelela ukuba i-lithium iya kuba yinto engaphantsi komsebenzi kunokuba i-sodium ne-francium iya kusebenza ngakumbi kunekesiyamu kunye nazo zonke ezinye izinto ezibhalwe ngasentla kwiqela leqela.
Yintoni ecacisa iReactivity?
I-Reactivity ngumlinganiselo wendlela inokwenzeka ngayo iindidi zeekhemikhali ukuthatha inxaxheba kwi-chemical response to form bonds. Into ebaluleke kakhulu, njengefluorine, inomtsalane ophezulu kakhulu kumakhonkco.
Izinto ezisekupheleni kwendima, njengezinto ezinokuthi zisebenzise i-cesium kunye ne-francium, ngokukhawuleza zibophelele izibhanki kunye nama-athomu aphezulu. Njengoko uhamba phantsi kwekholomu okanye iqela letafile yexesha, ubukhulu beerhasi ye-athomu buyanda. Kwizinyithi, oku kuthetha ukuba ii-electron zingaphandle ziba kude kude ne-nucleus ehlawuliswe kakuhle.
Ezi zinyoni zilula ukususa, ngoko ke ii-atom zivele zenze izibophelelo zeekhemikhali. Ngamanye amagama, njengoko ukwandisa ubukhulu bee-atom zesinyithi kwiqela, i-reactivity yayo iyanda.
Ukubona Umbala: weNgingqi, eNgqiqweni, kunye ne-Pictorial Color
Yintoni i-Filibuster kwi-Senate yase-US?
Yintoni iBattery Cage?
Gay Marriage Umzobo
Iinqununu Ezinhlanu Ezinkulu Zemizila Ezingqalileyo Zokuzingela